बोल्न नसकेको एउटा पीडा : ‘महिनावारी’ - Bibechana Bibechana
बोल्न नसकेको एउटा पीडा : ‘महिनावारी’
१९ जेष्ठ २०७७ १९:२० ||
दुहागढीमा २२ करोड लागतमा होल्डिङ सेन्टर बनाइँदै, नेपाली सेनालाई जिम्मा
मैले धेरै पटक बोल्न चाहेर पनि बोल्ने ठाउँ नै भेट्टाएकी थिइँन । मलाई बोल्न अफ्ठ्यारो लागिरहेको थियो । महिनैपिच्छे म आफैंले भोग्दै आएको अफ्ठ्यारोको विषयमा पनि बोल्ने आँट गरेकी थिइँन । किनकि, म पनि छोरी नै भएर जन्मिएको छु ।
म जस्ता लाखौँ छोरीहरुको पीडा बोल्न पनि मैले हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था कसले बनायो होला ? निःसन्देह यो समाजले बनाएको हो । यो समाजको अगाडि मैले बोल्न चाहेर पनि बोल्न नसकेको पीडा हो, महिनावारी अर्थात् रजस्वला ।
मलाई लाग्छ, हिजोका मानिसहरुले हिजोकै समाजलाइ मिल्ने नियम बनाएका थिए होला । पहिला धारा पधेँरा टाढा थिए, पानी बोकेर ल्याउन कठिन थियो । ब्यक्तिगत सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने चेतना कमजोर थियो होला ।
महिनावारी भएको बेला महिलाहरु कमजोर हुन्छन, सरसफाइमा पनि त्यसबेला विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने भएकाले पनि भान्साको काम गर्न नहुने भन्ने नियम बनाइएको हुनसक्छ । यस्ता नियमहरुले कतिपयलाई यस्तो बेला सजिलो पनि बनाइरहेको थियो होला ।
महिनावारीमा महिलाहरुले बार्ने कुरादेखि लिएर के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा त्यसबेलाको समाजको लागि जायज मान्न पनि सकिन्थ्यो होला । तर, के आजको समयमा त्यो सान्दर्भिक छ ? व्यवहारिक छ ? अवश्य पनि छैन । यस्तो नियमले गर्दा महिलाहरुको दैनिकीलाई अफ्ठ्यारो बनाइदिएको छ ।
महिनावारी भएको बेला खान, बस्न, काम गर्नदेखि लिएर प्रयोग गर्नुपर्ने सामानमा पनि समाजको साँघुरोपन र बन्धनले कति धेरै अफ्ठेरो बनाइदिएको छ । महिनावारीको समयमा महिलाहरू अझै पनि आफ्नै घर परिवार र समाजसँग खुल्न सक्दैनन । यस्तो बेलामा खानेकुरा छुन हँुदैन, मान्छेहरुदेखि टाढा नै बस्नु पर्छ, अछुत बन्नुपर्छ । जुनबेला परिवार र समाजबाट झन् धेरै आत्मीयता, सहयोग र मायाको खाँचो हुन्छ । त्यही बेला झन् अफ्ठ्यारोमा पारिन्छ ।
अझै पनि महिनावारीको बेला अति आवश्यक पर्ने ‘प्याड’ शब्द पनि खुलेर उच्चारण गर्न सक्दैनन् । पेट दुखेर सहन नसक्ने अवस्थामा मैले के गर्न हुन्छ के गर्न हँुदैन भनेर डराउनु पर्छ । उनीहरु खुलेर भन्न सक्दैनन् कि मलाइ पेट दुख्यो त्यसैले म यो काम गर्न सक्दिन । समाजको नियम कस्तो छ भने उनीहरुले खानेकुरा छुनदेखि बाहेक अरु बाहिरी कामहरु चैँ गर्न हुन्छ अझ गर्नै पर्ने बाध्यता पर्छ ।
मन्दिर जान त रोक नै लगाउँछ यो समाज । भगवान् भन्ने चिज आजसम्म देखेको छैन । तर, पनि मानिस ढुंगाको मूर्ति बनाउँछ अनि हामीले छुँदा गाली गर्छ । अचम्म त यो लाग्छ कि, किन धेरै पढेका विद्वानहरु पनि यो विषयमा केही बोलि दिँदैनन् ? किन मौन छन् किन ?
संसारभरि सबै महिलाहरुलाई हुने कुरा हो महिनावारी । मात्र यो प्रक्रिया चलाउने र श्रृष्टि निरन्तरताको आधारभूत पहिलो रुप हो । तर, हाम्रो नेपाली समाजमा महिनावारी, अपराध जस्तो हुन्छ, छुवाछुत हुन्छ किन ? मैले नै सुनेको छु, अनि मलाई भनेका पनि छन् महिनावारी हुँदा नछुने भको भनेर । अनि यो सुनिरहँदा पनि बुझेका अगुवाहरु मौन नै बस्छन् किन ? यसरी पनि कसरी हुन्छ परिवर्तन ?
मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो । जनचेतना छर्दै हिँड्ने अगुवाहरुलाई, के तपाईहरुको श्रीमती, दिदिबहिनी, भाउजु बुहारीलाई महिनावारीको समयमा तपाईंहरु सबैले छुनु भएको छ ? सँगै बसेर खानेकुरा खानु भएको छ ? पक्कै खानु भएको छैन, अनि कसरी हुन्छ परिवर्तन ? अझै कति पुस्ताले यो अफ्ठ्यारा भोग्नु पर्ने हो ? किन मौन छन् हाम्रो समाजको विद्वानहरु ? यो मौनताले कसरी हुन्छ परिवर्तन ?
के महिनावारी बिना मानव अस्तित्व सम्भव छ ? के फूल नफुली फल लाग्न सम्भव छ ? अवश्य छैन । जुन बेला महिला प्रकृति बन्छे, मानव अस्तित्वको मुल बन्छे । सृष्टि बन्छे । हो त्यहीबेला झन् विभेद गर्छ समाज । झन पीडा दिन्छ समाज । यस्तो बेला झन् धेरै नजिक हुनुपर्ने हो । झन् धेरै सहानुभूति पाउनुपर्ने, माया पाउनुपर्ने हो । तर अझै पनि छाउपडी गोठमा बलात्कृत हुन बाध्य छे । पीडा सहेर मर्न बाध्य छे ।
मलकाण्डले कृषिमन्त्रीलाई पद जोगाउन परेको सकस
हरिबहादुर थापा रासायनिक मलमा शैलजा आचार्यले जुन नियति भोगेकी थिइन्, यतिखेर घनश्याम भुसालका हकमा
ओली नेतृत्व : गुटको सबैभन्दा ठूलो सफलता
लीला बराल सत्ता शक्ति यस्तो सम्मोहनकारी छ कि, एकपटक मात्रै पनि त्यस आसनको स्वाद चाखेपछि
छोरीः घरकी लक्ष्मी घरभित्रै, समान अवसर गफ मात्रै
अस्मिता साँखी २१ औं शताब्दीको नेपाली समाजले अझै पनि छोरा र छोरीबीच समान व्यवहार गर्न
अचानक देशबासीका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलभित्र हुने बहस र विवाद आन्तरिक भएको बताएका छन्। शुक्रबार
बुवाले सिकाएको अनुशासनको पाठ
महेन्द्रकुमार गिरी म जन्मिँदा मेरा बा धेरै खुशी हुनु भएको थियो रे ! छोरा
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय तहको भूमिका
पुष्कर निरौला आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई जनतासम्म पुर्याउने, कार्यान्वयन गर्ने एकल अधिकारको रुपमा स्थानीय सरकारको भूमिका
मान्छेको जात मान्छे नै !
दीपेन्द्र राउत मानिसको जन्म जितबाट भएको हो । नौ महिनासम्म अँध्यारो ठाउँमा बसेर स्वयम् खानेकुरा
धान खेतीको प्राविधिक पाटो
कृष्ण ढुङ्गेल– बुद्धशान्ति गाउँपालिका,झापा धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न मध्ये एक प्रमुख बाली हो ।नेपालमा करिव
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा युवाको भूमिका
। भानु भट्टराई । दक्षिण पूर्वी एसियामा रहेका राष्ट्रहरूमा नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। नेपालमा
धैर्यको बाँध नफुटोस्
सन्तोष अग्रवाल लगभग अढाई महिनादेखि चलिरहेको लकडाउनका कारण रोगले भन्दा भोकले मर्ने डर
निजी क्षेत्रका समस्या यसपालिको बजेटले सम्बोधन गर्ला ?
सन्तोष अग्रवाल पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणको दायरा बढेसँगै संक्रमितको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्न थालेको छ
आशावादी बनौँ !
दीपेन्द्र राउत देश लक डाउन भए पनि समयलाई लक डाउनले रोक्न सकिँदैन । समय